China dorpshipping nnyemaaka ọrụ na gị n'ụlọnga | Sunson
Abamuru nke ịda mba
Ntufu bụ ezigbo azụmaahịa azụmaahịa maka ndị ọchụnta ego na-achọ ịmalite n'ihi na enwere ike ịnweta ya. Na ịda ada, ị nwere ike ịnwale ngwa ngwa azụmaahịa dị iche iche na enweghị oke, nke ga - enyere gị aka ịmụ ọtụtụ ihe gbasara etu esi ahọta na ịre ngwaahịa na ngwa ahịa. Ndị a bụ ihe ole na ole ndị ọzọ mere ọdịda dị ka ụdị ihe a ma ama.
1. Achọrọ obere ego
Eleghị anya uru kasịnụ dị na mmiri mmiri bụ na ọ ga-ekwe omume ịmalite ụlọ ahịa ecommerce na-enweghị itinye ego puku kwuru puku dollar na ngwa ahịa. Na ọdịnala, ndị na-ere ahịa aghaghị ijikọ ọnụ ahịa nke ịzụ ahịa isi obodo.
Na ụdị ịda mba, ị gaghị azụta ngwaahịa belụsọ na ibidola ire ya ma ndị ahịa kwụrụ gị. Enweghi ntinye ego dị elu na ihu ihu, ọ ga-ekwe omume ịmalite ịmalite ngwaahịa na ịmalite obere azụmaahịa na-aga nke ọma na obere ego. Ma n'ihi na ị naghị etinye aka n'ahịa-site na ngwongwo ọ bụla a zụrụ n'ihu, dị ka azụmaahịa azụmaahịa ọdịnala, enwere obere ihe egwu dị na ịmalite ụlọ ahịa na-ada mba.
2. Mfe ịmalite
Gba ọsọ ahịa ecommerce dị mfe karịa mgbe ị na-enweghị ngwaahịa ngwaahịa. Na ịda mba, ị gaghị echegbu onwe gị:
Ijikwa ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ maka ụlọ nkwakọba ihe
Mbukota na mbupu iwu gị
Ndepụta ngwaahịa maka ihe ndekọ ego
Na-aga n'ihu ịtụ ngwaahịa na ijikwa ọkwa ngwaahịa
Maka na ịkwesighi ịmekọrịta ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ijikwa ụlọ nkwakọba ihe, mmefu mmefu gị pere mpe. N'ezie, ọtụtụ ụlọ ahịa na-aga nke ọma na-agba ọsọ dị ka azụmaahịa ụlọ, na-achọ obere karịa laptọọpụ na mmefu ole na ole iji rụọ ọrụ. Ka ị na-etolite, ego ndị a nwere ike ịbawanye mana ọ ka ga-adị ala ma e jiri ya tụnyere nke azụmahịa azụmaahịa brik na-ngwa agha.
4. Ọnọdụ na-agbanwe agbanwe
Azụ ahịa na-adaba na mmiri nwere ike ịgba ọsọ site na ebe ọ bụla yana njikọ ịntanetị. Ọ bụrụhaala na ị nwere ike ikwurịta okwu na ndị na-ebubata ya na ndị ahịa gị ngwa ngwa, ịnwere ike ịgba ọsọ ma jikwaa azụmahịa gị.
5. Nnukwu nhọrọ nke ngwaahịa ịre
Ebe ọ bụ na ịkwesighi ịzụta ihe ndị ị na-ere, ị nwere ike ịnye ndị ahịa gị ọtụtụ ụdị ngwaahịa. Ọ bụrụ na ndị na-ebubata ngwaahịa na-ebupụta otu ihe, ị nwere ike depụta ya maka ọrịre na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na-akwụghị ụgwọ ọzọ.
Ntufu bụ usoro mmezu bara uru maka ịmalite ụlọ ahịa ọhụrụ yana maka ndị ahịa azụmaahịa na-achọ ịnwale agụụ ndị ahịa nwere maka ụdị ngwaahịa ndị ọzọ, dịka, ngwa ma ọ bụ ahịrị ngwaahịa ọhụụ. Isi uru nke ịdafu bụ, ọzọ, ikike ịdepụta ma nwee ike ree ngwaahịa tupu ịnye ịzụta nnukwu ngwakọ.
7. Mfe nha
Na azụmahịa azụmaahịa ọdịnala, ọ bụrụ na ị nweta okpukpu atọ karịa iwu, ị ga-arụkarị ọrụ okpukpu atọ. Site na iji ndị na-ebubata ya na-ebugharị, ọtụtụ ọrụ iji hazie iwu ndị ọzọ ga-ebu ndị na-eweta ya, na-enye gị ohere ịbawanye site na obere mgbu na-eto eto na obere ọrụ mgbakwunye.
Ahịa ibu ga-mgbe nile weta ọzọ ọrụ-karịsịa metụtara ahịa nkwado-ma ulo oru na ahu nagide dropshipping n'ọtụtụ karịsịa ọma ikwu omenala ecommerce ulo oru.
Bido azụmahịa azụmaahịa gị taa